About • Vector Online Learning Platform in Myanmar | Best E Learning
About of Vector Online Learning Platform
Online Learning Website အကြောင်း နှင့် အားသာချက်များ
ခေတ်စနစ်တွေ အသီးသီးပြောင်းလဲ တိုးတက်လာတာနဲ့အတူ ပညာသင်ကြားပြသခြင်း၊သင်ယူခြင်း တွေမှာလည်း ပုံစံတွေ အမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲ တိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ (၂၁)ရာစု ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်ရဲ့ ပညာသင်ယူခြင်း၊သင်ကြားပြသခြင်းပုံစံ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Vector online Learning Website အကြောင်းကို အနည်းငယ်မိတ်ဆက်ပေးလိုပါတယ်။ ဆရာဖြစ်သူက အနီးကပ်လာသင်ပေးနေသလိုမျိုးဖြစ်အောင် ဖန်တီးစီစဉ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်
ဒီနေ့ခေတ်ရဲ့ အရေးအကြီးဆုံးတစ်ခုကို ပြောပါလို့ဆိုရင် အချိန်ရှားပါးမှုပြဿနာလို့ပဲပြောရမယ်ထင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ Online Learning Website မှာ သင်ကြားပြသထားတဲ့ ဘသာရပ်အသီးသီးကို တတ်နိုင်သမျှ လိုအပ်ချက်အဓိကပွိုင့်တွေကိုပဲ ရွေးပြီး လိုရင်းတိုရှင်းထိထိမိမိဖြစ်အောင် အချိန်မကုန်စေရအောင်ဖန်တီးသင်ကြားထားပါတယ်။နောက်တစ်ခုက အသုံးတွင်ကျယ်တဲ့ Program တစ်ခုထဲပဲသင်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းသင်လို့ရအောင် Course တစ်ခုချင်းစီ ခွဲပြီးတော့ စီစဉ်ထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သင်ချင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ အချိန်တိုတိုနဲ့လိုရင်းရောက်ပြီး ငွေကြေးအနေနဲ့လည်း သိပ်အများကြီးကုန်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။
ပညာရပ်တွေကို သင်ယူတဲ့နေရာမှာလည်း ပထမဆုံး သိနားလည်ဆိုတာကို အခြေခံပြီးတော့မှ တတ်ကျွမ်းကျင်ဆိုတာဖြစ်လာရတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။အခုလို online learning မှာကျတော့ အခုနပြောသလို သိနားလည်ဖို့အတွက် အခြေအနေအခွင့်အလမ်းတွေ အားသာချက်တွေ အများကြီးပဲ။ သင်ကြားပြသသူ ဆရာကိုယ်တိုင် အနီးကပ်လာသင်နေသလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အပြင် အကြောင်းအရာတစ်ခုကို နားမလည်မချင်း အပြန်ပြန်အလှန်လှန် ထပ်ကာထပ်ကာနဲ့ အားမနာတမ်း Replay လုပ်ပြီး လေ့လာနေလို့ရတဲ့အပြင် ကြိုက်တဲ့အချိန်၊ကြိုက်တဲ့နေရာ မှာလေ့လာလို့ရပြီး ဘယ်လိုနှောင်ဖွဲ့မှုမှမရှိပဲ အရာရာတိုင်းဟာ ကိုယ့်အပေါ်မှာပဲမူတည်နေတော့တယ်လေ။နောက်တစ်ခု ကောင်းတာက အဲဒီလိုတွေလေ့လာဖန်များလာတဲ့အခါ ကျွဲကူးရေပါ ဆိုတာလို Self Study နဲ့ Self Control တွေ တစတစတိုးပွားလာပြီး သင်ယူမှုစနစ်မှန်နယ်ပယ်ထဲကိုထိုးဖောက်ဝင်ရော က်ပြီးအောင်မြ င်မှုတွေရသွားလိမ့်မယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။
အခုဒီ Online ကနေ တက်ရောက်သင်ယူနေသူတွေရဲ့ သင်ယူမှု အခြေအနေကို Server Admin ကသိနေမှာဖြစ်ပြီး အခက်အခဲတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့လို့ မေးချင်ရင်လည်းမေးလို့ရအောင် Server Admin နဲ့သင်ယူသူတို့ အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက် ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။လိုအပ်လို့ ဖုန်းထဆက်ရင်လည်း လွယ်နေတဲ့ခေတ်ကြီးဆိုတော့ တော်တော်ကိုပဲ အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်။သင်ခန်းစာတစ်ခုပြီးတိုင်း online exam ဖြေရမှာဖြစ်ပြီးတော့ အောင်မှတ်ကိုတော့ ၅၀ လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။သင်ခန်းစာတွေ အကုန်လေ့လာပြီးသွားရင်လည်း Final Exam ဖြေရမှာပါ။ ဖြေပြီးပြီးချင်း ရမှတ်နဲ့ အောင်/ရှုံး အခြေအနေကိုတော့ ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ယုံနဲ့ သိရအောင်လုပ်ထားပါတယ်။အဲဒီလိုဖြေလို့ ၆၅ မှတ်ရရင် အောင်မှာဖြစ်ပြီး အောင်ပြီဆိုချက်ချင်းပဲ အဲဒီဘာသာရပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Certificate ကို Email ကနေပို့ပေးတဲ့စနစ်ကိုလည်း လုပ်ထားတယ်။ခက်ခဲ နက်နဲတဲ့ပညာတွေကိုတောင်မှ ဒီနည်းစနစ်နဲ့လေ့လာတဲ့အခါမှာ ထင်သလောက် အခက်အခဲမရှိပဲနဲ့ အဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရတယ်။ Self Study နဲ့ Self Control တွေကို အခြေခံဇောင်းပေးပြီးတော့ လေ့လာသင်ယူမယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ခက်တဲ့ ပညာရပ်ဖြစ်ပစေ လွယ်လွယ်လေးနဲ့ နားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့ အဟုတ်တကယ်တတ်မြောက်တဲ့သူ တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ အဟုတ်တကယ်တတ်မြောက်တဲ့သူ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ရဲရဲကြီး အာမခံပါတယ်။
*သင်ကြားလိုပါက အောက်ပါ ဘဏ်အကောင့်များသို့ တိုက်ရိုက်ငွေလွှဲ၍
တစ်ဖက်ပါအတိုင်း ဖြည့်သွင်းပြီး “အိုကေ” ကိုနှိပ်ပါ။
KBZ Bank ACCOUNT NUMBER:
30630199920042801 (Myat Min Lu)
08730199919998801 (Than Htun Oo)
AYA Bank ACCOUNT NUMBER:
0052201010104896 (Myat Min Lu)
CB Bank ACCOUNT NUMBER:
3571 0830 0949 8758 (Myat Min Lu)
0070600100005738 (Than Htun Oo)
Wave Money :
အခြေခံသိစရာ တက်စရာ ကွန်ပျူတာ Adobe PageMaker Complete Course ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ရေးဆွဲနည်း AutoCAD Adobe Photoshop Microsoft Excel Microsoft Word Microsoft Powerpoint
ငွေလွှဲဘဏ်ချလံ ဓာတ်ပုံ နှင့်အတူ မိမိတက်ရောက်လိုသော သင်ခန်းစာ နာမည်နှင့် မှတ်ပုံတင်ထားသော အမည် တို့ကို “info@vector.com.mm” (သို့မဟုတ်) Viber နံံံပါတ် 09798961050, 09259481247 သို့လည်းကောင်း ပေးပို့အတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။
ငွေလွှဲပြီးပါက : ငွေလွှဲဘဏ်ချလံ ဓာတ်ပုံ နှင့်အတူ မိမိတက်ရောက်လိုသော သင်ခန်းစာ နာမည်နှင့် Register လုပ်ထားသော username or email address တို့ကို
“info@vector.com.mm” သို့မဟုတ် Viber No. 09798961050 (သို့မဟုတ်) 09259481247
Domain active. မျဖစ္ဘဒဗ်
သင္တန္းေၾကးက တစ္ခုသြင္းျပီး တစ္ခုပဲေလ့လာလိုံရတာလား အကုန္ေလ့လာလိုံရလား